प्राथमिकतामै परेन विकास खर्च लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक ९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने
भागवत भट्टराई काठमाडौं, १९ जेठ
संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि २६ प्रतिशत रकम राखिन्छ । तर, वर्षभरि हुने जम्मा खर्चमा पुँजीगत २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको पछिल्लो ५ वर्षमा भएको खर्च विवरणले देखाएको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि गरिने भुक्तानीमा जेठ र असारमा गरी करिब ५० प्रतिशत भुक्तानी हुने गरेको छ । फागुनदेखिकै बाँकी रहेको बिलबिजक र असारमा काम नसके रकम फ्रिज हुने भएका कारण असारमा विकास निर्माणका काम पनि बढी हुने भएकाले रकम अन्य समयमा भन्दा बढी भुक्तानी हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह स्वीकार्छन् ।
पुँजीगत खर्चमध्येको अधिकांश रकम निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुनेगर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बिलबिजक फर्छ्याेट असारमा बढी हुने भए पनि असारमा नै धेरै काम हुने यथार्थ नभएको बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा परिस्थिति बदलिएको छ । आव २०७४/७५ काे असार महिनामा भएको पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू वर्षको १९ असारसम्म १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आव २०७५/७६ मा भएको खर्चको हिसाबले १४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आव २०७४/७५ काे असार महिनामा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ भने आव २०७५/७६ मा ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालू आवमा भने असार महिना लागेपछि १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएकोमा १९ असारसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कोरोना महामारी र सरकारले ११ चैतदेखि लगाएको लकडाउनले काम नभएको र पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दायित्व कम आएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।
पछिल्लो १९ दिनमा सरकारले ७३ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गरेकोमा चालू खर्च मात्रै ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ भने विकास खर्च १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
असारमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत छ भने चालू खर्च ७३ प्रतिशत छ । ११ महिना १९ दिनमा भएको खर्चको हिसाब पनि करिब यस्तो छ । चालू खर्च ७६ प्रतिशत छ भने पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै छ ।
खर्च प्रवृत्ति बदलिएको कि काम नभएको ?
३ साताअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू खर्च धान्नसमेत समस्या परेको गुनासो संसदमा गरेका थिए । उनले १५ अर्ब हाराहारीको मात्रै राजस्व आम्दानी भए पनि अत्यावश्‍यक दायित्वका लागि न्यूनतम ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्ने बताएका थिए । तर, महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयका अनुसार १९ असारसम्म संघीय सरकारको बचत बजेट १० अर्ब रुपैयाँ छ । ऋण अनुदान तथा राजस्वबाट सरकारसँग भएको रकमको तुलनामा सरकारले चालू आवको १९ असारसम्म गरेको खर्च १० अर्ब रुपैयाँ न्यून रहेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएकाे छ ।
तर, सरकारको समग्र खर्च औसत रहे पनि विगतका वर्षमा जेठ र असारमा गर्ने पुँजीगत खर्चको हिसाबले भने न्यून मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । चालू खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सरकारले गत चैतमा मात्रै १४ किसिमका खर्च कटौती गरेको थियो । तर, खर्च कटौती गरेर पनि अन्य महिनाको तुलनामा चालू खर्च बढी देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्च पनि अन्य मंसिरपछिका महिनाहरूकै दाँजोमा नै रहे पनि सामान्यतया जेठ र असारमा मात्रै आधाभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने गर्छ । गत आवमा भएको पुँजीगत खर्चमध्ये जेठ र असारको खर्च मात्रै ५१ प्रतिशत थियो । असारको मात्रै ३४ प्रतिशत खर्च थियो ।
चालू आवमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्च जेठको ३१ र असारको १९ दिनमा १७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । जेठमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने असारमा १९ दिनको अवधिमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले कोरोना महामारी र लकडाउनका बीच पनि चालू आवमा पुँजीगत खर्च गत वर्षकै बराबर अर्थात् २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ हुने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवको खर्च अनुमानलाई तेस्रो पटक संशोधित लक्ष्य अनुमान गर्दै पुँजीगत खर्च ५८. ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् । गत वर्ष पनि सरकारले १ अर्ब न्यून २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
यदि सरकारले पछिल्लो पटक राखेको लक्ष्य र बजेटमा तोकिएको लक्ष्यको ५८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नका लागि अबको ११ दिनमा सरकारले १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि दैनिक ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हुन्छ ।
पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी एक दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँ त्यो पनि अपवादमा मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । सामान्यतया असार लागेपछि दिनको औसत ३ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । चालू आवको असारको १९ दिनको अवधिमा दिनमा ९० करोड औसत खर्च भएको छ ।
गत आवको असार महिनामा भएको रकम मात्रै खर्च गर्नका लागि पनि दिनको साढे ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको दिनमा दिनको औसत ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुँदा पनि अधिकतम १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यसो हुँदा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको रकमको ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनेछ ।
राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदान गरेर सरकारले पछिल्लो १९ दिनको अवधिमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएछ । महालेखा नियन्त्रक गोपीप्रसाद मैनाली रकम अभावका कारण पुँजीगत खर्च न्यून नभएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, १९ असार २०७७, १३:२६:००